राष्ट्रिय दुग्ध नीति कार्यान्वयन भएन | गृहपृष्ठ
Home समाचार राष्ट्रिय दुग्ध नीति कार्यान्वयन भएन
राष्ट्रिय दुग्ध नीति कार्यान्वयन भएन
जेठ १०, काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति, २०६४ लागू भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म निर्देशिका तयार नहुँदा राष्ट्रिय दुग्ध नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका महानिर्देशक डा. डीएन पाठकले बताए । अर्थ मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायत १४ निकायको संलग्नतामा बोर्डले बनाएको निर्देशिका कृषि मन्त्रालयमा डेढ वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ । ‘मन्त्रालयमा फाइल अड्किएर बस्दा जारी भएको नीति अधुरै रहेको छ’ पाठकले भने, ‘जारी नीतिमा दूध उत्पादन बढाउने धेरै कार्यक्रम समेटिए पनि यसलाई कसरी किसानसमक्ष पुर्याउने भन्ने निर्देशिका पास हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
यता कृषि मन्त्रालयले भने बोर्डले बनाएर पठाएको निर्देशिका पास हुन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका किसानलाई भन्सार छूटलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कानून तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी केही थपघट गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहालले बताए । उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयसँगको छलफलपछि उक्त निर्देशिका पास गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
उक्त नीतिमा दूध उत्पादक कृषक तथा उद्यमीलाई बीउविजनमा अनुदान, पशु आयात र प्रशोधन उद्योग स्थापनामा भन्सार छूट तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । साथै उन्नत जातका पशु उत्पादन वृद्धि गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन तथा पशुधन बीमाको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले किसानलाई पशुबीमा गराउँदा लाग्ने प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको रकम लगातार ३ वर्षदेखि फ्रीज हुँदै आएको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद कोइरालाले जारी भइसकेको नीति कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी सहुलियतको रकम फ्रीज भएको आरोप लगाए । चालू आर्थिक वर्षमापनि सरकारले पशुबीमाका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । तर, दूग्ध नीति पास नभएकाले यो वर्षपनि छुट्टयाइएको रकम फ्रीज हुने सम्भावना रहेको कोइरालाले बताए ।
आन्तरिक बजारमा अहिले दूध र दुग्ध परिकारको माग बढ्दै गएको छ । तर, यो माग स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सकको छैन । अहिले दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूधको अभाव रहेको बोर्डले बताएको छ । हाल आन्तरिक बजारमा दैनिक १० लाख लिटर दूधको माग छ । तर, दूध उत्पादन ३ लाख ६० हजार लिटर मात्रै हुने गरेको बोर्डका महानिर्देशक पाठकले बताए । दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई निकासीयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । तथापि लागू भइसकेको दुग्ध नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा उत्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसबाट बजारमा दूधको अभाव भइरहेको छ ।
दुग्ध विकास नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायहरु
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
अर्थ मन्त्रालय- कर, भन्सार तथा अन्य छूटको व्यावस्था
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड- नीतिनिर्माण कार्यान्वयन र अनुगमन
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्- दुग्ध उत्पादन प्रविधिको विस्तार
पशु सेवा विभाग- पशु आहारा, तालीम र व्यावस्थापन
खाद्य प्रविधि, गुण नियन्त्रण विभाग- गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र निर्देशन
सहकारी विभाग- दुग्ध सहकारी विकास, विस्तार र मूल्याङ्कन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय- मेशिन, उपकरणको आयात निर्यात
कृषि विकास बैङ्क- दुग्ध उद्यमीलाई ऋणको व्यवस्था
दुग्ध विकास संस्थान- दुग्ध पदार्थ उत्पादन र विस्तार
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ- दुग्ध प्रशोधन उद्योगको स्थापना र सञ्चालन
नेपाल डेरी एशोसिएशन- समस्या पहिचान, उद्योगमा संहिता लागू र अनुगमन
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड- दुग्ध सहकारीको सुदृढीकरण र सञ्चालन
बर्डफ्लू परीक्षण अब चितवनमै
जेठ १०, चितवन । कुखुरामा लाग्ने बर्डफ्लू रोगको परीक्षण अब चितवनमै गरिने भएको छ । कुखुरापालक किसानले राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरबाट यो सेवा प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् ।
कुखुरामा देखिने बर्डफ्लू रोग पत्ता लाग्ने प्रविधि नेपालमा नहुँदा परीक्षणका लागि कुखुरापालक कृषक तथा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्दै आएका थिए । यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि पोल्ट्री क्षेत्रका लागि राजधानी मानिएको चितवनलगायत देशका अन्य भागका कुखुरापालक कृषकसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
डेढ वर्षअघि विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा रू. १ करोडबराबरको अत्याधुनिक मेशिन पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा ल्याइएको थियो । कुखुरालगायत पक्षीमा लाग्ने रोग पत्ता लगाउन आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक मेशिनहरू इन्सिनेरेटर, इग इक्युवेटर, इन्क्युवेटर, यूपीएस, जेनेरेटर जडान भइसकेका छन् । सुरक्षा एवम् रोग परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने बायोसेफ्टी क्याबिनेट र हाई स्पीड सेण्ट्रिफयुज जडानपछि सो सेवा उपलब्ध भएको प्रयोगशालाका भेटेरिनरी अधिकृत डा. विजयकुमार श्रेष्ठले बताए । विश्वकै सबैभन्दा नयाँ प्रविधि मानिने रियल टाइम पीसीआर सञ्चालनपश्चात् पोल्ट्रीक्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालमा यो प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएका प्रविधिक नभएका कारण हाललाई जापानबाटै प्राविधिक ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रविधि सञ्चालनमा ढिलाइ भएको श्रेष्ठले बताए । नेपालका ह्याचरी फर्ममध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी चितवनमै छन् । यो सेवा शुरू भएपछि चितवनका कुखुरापालक खुशी देखिएका छन् ।
मकैमा नयाँ रोग
जेठ १०, धनगढी । कैलालीका विभिन्न गाविसमा खेती गरिएको ग्रीष्मकालीन मकैमा नयाँ रोग देखा परेको छ । कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार मकैको सबैभन्दा माथिल्लो पात सेतो हुने र त्यसपछि सुक्ने रोग देखा परेको हो । उक्त रोग जिल्लाका प्रायः सबै गाविसमा देखिएको बताइएको छ । रतनपुर भुइँयाफाँटाका कृषक कमल चौधरीले यो रोगको सङ्क्रमण प्रायः सुक्खा मौसममा हुने गरेको बताए । शुरूमा पातको टुप्पोबाट सुक्दै जाने र अन्त्यमा बिरुवा नै पूरै सेतो भएर मर्ने लक्षण देखापर्ने स्थानीय कृषकहरू बताउँछन् ।
ग्रीष्मकालीन मौसममा लगाइएका मकै प्रायः धेरैजसो गाविसमा भेटिएको ‘फाया नेपाल’को खाद्य सुविधा परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक रामबहादुर खड्काले बताए । गतवर्षदेखि नै उक्त रोग देखा परेको उनको भनाइ छ । यो मौसममा थोरै जग्गामा मात्रै मकैखेती गर्ने हुँदा उनीहरूले यसबारे खासै ध्यान नदिने प्राविधिकहरूको अनुभव छ । यो रोगको लक्षण हेर्दा मेज लेथल नेक्रोसिस भाइरसको सङ्क्रमणजस्तो देखिएको खड्काले बताए ।
तर, रोगबारे राम्ररी परीक्षण नगरी अहिले नै केही भन्न नसकिने उनको कथन छ । सुक्खा याम भएकाले ब्याक्टेरिया र ढुसीका कारण यो रोग हुने सम्भावना कम रहेको तर कहिलेकाहीँ भने दुई वा सोभन्दा बढी भाइरसजन्य रोग एकैपटक लाग्दा यस्तो लक्षण देखिने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्षको मकै बालीमा रोगको प्रकोप बढी देखिएको कृषकहरूले बताएका छन् । रोगको कारण र निदानतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन नसकेमा ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावित डरले कृषकहरू चिन्तित बनेका छन् । तर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत जीतबहादुर थापाले अहिलेसम्म यसबारे कृषि कार्यालयमा कुनै पनि गुनासो नआएको बताए ।
कृषि उपज बढाउन बजेट विनियोजन
जेठ १०, वीरगञ्ज । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्सामा साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमानिम्ति रू. १७ लाख विनियोजन गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक सिँचाइका निम्ति उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । विनियोजित रकम किसान समूहतर्फ पम्पिङ सेटबाट सिँचाइका लागि रू. १४ लाख र सहकारी खेतीमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रमका लागि रू. ३ लाख रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
योजनाको कार्यान्वयनका लागि साना किसान समूहबाट १ सय १७ र सहकारी खेतीमा आधारित सिँचाइका लागि ३२ गरी कुल १ सय ४९ ओटा निवेदन परेका थिए । साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आयोजनाका लागि न्यूनतम रू. २५ हजार सहयोग दिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी सहकारी खेतीअन्तर्गत रू. ८ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि कार्यालयका अनुसार उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि चारओटा निवेदन परेका छन् । विगत तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कृषि विकास कार्यालयबाट यस्तो कार्यक्रमको उपभोग गरेका किसान समूहलाई यस योजनामा समावेश गराइएको छैन । यस योजनामा नयाँ कृषक समूहलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बैठकले निर्णयगरेको छ ।
योजना छनोट गर्दा उपयुक्त सम्भाव्यताका आधारमा दलित, आदिवासी, अपाङ्ग, महिला, पिछडिएको समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखिने नीति रहेको छ । बैठकमा जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख र सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो । रासस
स्याङ्जाको माटोमा नाइट्रोजन कम
जेठ १०, स्याङ्जा (अस) । स्याङ्जाका अधिकांश क्षेत्रको माटोमा नाइट्रोजनको कमी रहेको वालिङ-८, त्रियासीमा सम्पन्न माटो परीक्षण शिविरले जानकारी दिएको छ । परीक्षण गरिएको माटोमध्ये कृषकले ल्याएको ८१ प्रतिशत माटोको नमूनामा कम नाइट्रोजन रहेको परीक्षणमा सहभागी क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाका माटोविज्ञ इन्द्रबहादुर ओलीले बताए ।
क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला कास्की, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय स्याङ्जा र त्रियासी कृषि उपज तथा बजार व्यवस्थापन सहकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा त्रियासीमा सप्ताहव्यापी माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । शिविरमा विभिन्न क्षेत्रका ३ सय ४ कृषकले ल्याएको माटो परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण गरिएको अधिकांश माटोमा ६८ प्रतिशतसम्म अम्लीयपन पाइएको छ ।
माटो परीक्षण शिविरमा स्याङ्जाको थुमपोखरा, खिलुङ, छाङछाङ्दी, जगतभञ्ज्याङ, स्वरेकलगायत गाविस र वालिङ नगरपालिकाका कृषकको सहभागिता रहेको थियो । क्षेत्रीय कृषि निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर हमाल, कृषि विकास कार्यालय स्याङ्जाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीलगायतले परीक्षण गरिएको माटोका लागि १५ टन कृषिचून आवश्यक पर्ने भन्दै कृषि कार्यालय, स्थानीय कृषक, गाविस, नगरपालिकालगायतको सहयोगमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बाग्लुङमा नमूना च्याउखेती
जेठ १०, बाग्लुङ (अस)। बाग्लुङ जिल्लाको पश्चिममा पर्ने दगातुमडाँडा-४, खर्बाङमा जिल्लाकै नमूना व्यावसायिक च्याउखेती शुरू गरिएको छ । सदरमुकाम बाग्लुङ बजारदेखि ६५ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने खर्बाङमा मनोज गैरेले व्यावसायिक च्याउखेती गरेका हुन् ।
व्यावसायिक मौरीपालन गरिरहेका गैरेले कास्कीको लुम्लेमा च्याउखेतीसम्बन्धी तालीम लिएपछि व्यावसायिक रूपमा च्याउखेती गर्न थालेका हुन् । मौरीपालनबाट मनग्ये आम्दानी गरिरहेका कृषक गैरेले २ लाखभन्दा बढी लगानी गरेर अहिले च्याउखेती पनि थालेका हुन् । मासिक ५ सय रुपैयाँ भाडामा जग्गा लिएर गैरेले अहिले ६ सय गोला च्याउ उमार्ने गरेका छन् ।
पहिलोपटक उत्पादन गरेको च्याउले राम्रो बजार पाएको उनले बताए । त्यसैको हौसलाले अहिले च्याउखेतीको क्षेत्र विस्तार गरी उत्पादन वृद्धितर्फलागेको गैरेको भनाइ छ । यसपटक ६ क्विण्टल च्याउ उत्पादन हुने बताउँदै एकपटकमा २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म नाफा लिने गैरेको योजना छ ।
एक किलो च्याउ ३ सयदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गैरेको भनाइ छ । ‘पहिला उत्पादन गरेको च्याउ राम्रोसँग विक्री भयो’ उनले भने, ‘च्याउले राम्रो बजार पाएपछि अहिले खेती विस्तार गरेको छु ।’ पछिल्लो चरणमा धेरै उत्पादन हुने भएकाले गैरेले आफ्नो पायक पर्ने बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ बजार र पश्चिम बुर्तिबाङ बजारसम्म च्याउ पुर्याउने योजना बनाएका छन् । बुटवल र सदरमुकाम बाग्लुङ बजारसम्म यातायातको सुविधा भएकाले उत्पादित च्याउले राम्रो बजार पाउने गैरेले बताए ।
मलेसियाबाट फर्केर भेडापालन
जेठ १०, पर्वत (अस) । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेर २ महीनामै फर्केका एक युवाले गाउँमै भेडापालन व्यवसाय शुरू गरेका छन् । पर्वत शङ्करपोखरी-४ का युवा तेजबहादुर थापाले भेडापालनबाट वार्षिक डेढलाखसम्म कमाइ गर्न सफल भएका छन् । १६ ओटा भेडा किनेर व्यवसाय शुरू गरेका थापासँग अहिले ४३ ओटा भेडा छन् । भेडापालनबाट मासिक खर्च कटाएर १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने थापाले बताए । स्वदेशमै परिश्रम गर्न लाज मान्ने तर विदेशमा गएर पसिना बगाउने युवाहरूका लागि यो एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ ।
झन्झटिलो र चरनको अभावका कारण यो व्यवसाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो बेलामा थापाले यस व्यवसायबाट राम्रो कमाइ गर्नुका साथै परम्परागत व्यवसायको पुनरावृत्तिसमेत गरेका छन् । लगनका साथ परिश्रम गर्नसके गाउँमै पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो व्यवसाय शुरू गरेको थापाको भनाइ छ ।
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले बेरोजगार युवाहरूलाई आयआर्जनको काममा लगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट लिएको २२ हजार रुपैयाँले थापाले भेडापालन शुरू गरेका थिए । यो व्यवसायबाट आर्जित धनले छोराछोरी पढाउन र घरखर्च गर्न सघाउ पुगेको उनले बताए । भेडाको पाठा स्थानीय गाउँघरमा नपाइने भएकाले बजारको कुनै समस्या नभएको थापाको भनाइ छ । गाउँघरमा पूजा गर्नका लागि भेडाको पाठा चाहिने भएकाले एउटा भेडाको मूल्य ८ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म आउने गरेको उनले बताए ।
गाउँमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले शुरू गरिएको सो कार्यक्रमबाट पर्वत जिल्लामा गतवर्षमात्र ५७ जनाले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा र भेडापालन शुरू गरेका छन् । प्रत्येक वर्षबेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर सो कार्यक्रमअन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउने जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए ।
आम्दानीको गतिलो स्रोत मौरीपालन
जेठ १०, पर्वत (अस) । एक दशकअघिदेखि मौरी पाल्न शुरू गरेकी यहाँकी एक महिलाले मनग्ये आम्दानी गर्न सफल भएकी छन् । उत्तरी पर्वतको देउपुर गाविस-७ ठुलास्वाँराकी पवित्रा तिमल्सिनालाई लघुउद्यम पर्वतले मौरीपालन तालीम दिएपछि २०५६ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन गर्दै आएकी हुन् । उनले मौरीपालनबाट वर्षकोनि २ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएकी छन् ।
उत्पादित महको मूल्य प्रतिकेजी रू. ४ सय पर्ने उनले बताइन् । मह खरीदका लागि काठमाडौं, पोखरा तथा तराईका विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू आउने पनि तिमल्सिनाले बताइन् । महको राम्रो उत्पादन गर्नसके बजारको समस्या नभएको तिमल्सिनाको अनुभव छ ।
मौरीको एउटा घारबाट वार्षिक ६ ओटासम्म नयाँ घार निकाल्न सकिन्छ । गाउँघरमा मौरीपालन गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले नयाँ घार विक्रीका लागि समस्या नभएको उनको भनाइ छ । अहिले उनीसँग भएका मौरी घार विस्तार गर्दा ८० ओटासम्म थप घार उत्पादन हुने तिमल्सिना बताउँछिन् । आफू व्यावसायिक मौरीपालक कृषक भएका कारण स्थानीय विकास कोष, लघुउद्यम विकास कार्यक्रमलगायतका संस्थाले समयसमयमा तालीम दिने उनले बताइन् । साथै, ती संस्थाले बजार खोज्नसमेत सहयोग गर्दै आएको हुँदा मौरीपालनका लागि सहज भएको उनले बताइन् ।